Roams, barnaamijka kaa caawin doona inaad yareyso biilka taleefankaaga | Wararka Gadget
Roams, codsiga kaa caawin doona inaad yareyso biilka taleefankaaga
Waxaa jira codsiyo badan oo lagu xakameynayo kharashyadayada ku yaal dukaamada arjiyada kala duwan. Xaqiiqdii, bangiyada oo dhan waxay leeyihiin codsi u gaar ah aaladaha mobilada oo aan ku haysan karno "kaarka dijitaalka ah" oo aan u arki karno dhaqdhaqaaqa koontadayada adigoon u tagin bangigeenna. Waxa intaa ka sii badan ma jiraan waa codsiyo sida Wareega, barnaamij naga caawiya yareeyo kharashka ku baxa taleefanka.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Roams waa inay ka mid tahay codsiyadaas shaqada noo qabta. Haddaan tixgelinno beddel wadaha ama heerka, waxa caadiga ah waa in la raadiyo oo la isbarbar dhigo daraasiin qiimayaal si markaa, mararka qaarkood, aanan u helin wax cad. Waqtiyada kale, waxaan u maleynayaa in kiisaska badankood, aan heli karno wax cad, laakiin ma keydin doonno inta aan kari karno isbeddelka. Roams wuxuu isbarbar dhigayaa qiimayaasha noocan ah xitaa wuxuu fiirinayaa isticmaalkeena bilihii lasoo dhaafay si uu noosiiyo sicirka sida ugufiican noogu haboon. Dhawaaq fiican sax?
Roams, isbarbardhiga heerkaaga iyo waxbadan
Marka dalabka la soo dejiyo oo la rakibo oo aan is aqoonsanno, waxaan ku xiri karnaa koontadeena Roams. Waxa ugu horreeya ee aan arki doonno waa qaybta "Khadkeyga", halkaasoo aan ku arki doonno dhammaantood dhaqdhaqaaqa bil kasta in aan qabanay illaa iyo hadda, sida xogta la cunay, daqiiqado la cunay, intee in le'eg ilaa wareegga biilka cusub uu bilaabmayo, iyo kharash uruurinta. Waxaan sidoo kale heli doonnaa ikhtiyaar noo oggolaanaya inaan soo dejino qaansheegadka ugu dambeeyay. Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee ka muuqata qaybtaan ayaa ah inay noo sheegayso haddii aan joogto nahay.
Qaybta "Qiimayaasha" waa halka aan ka ogaan karno waa maxay heerka na xiiseyn kara. Tan awgeed waa inaan calaamadeynaa illaa 4 nooc oo sicirro ah, inta udhaxeysa taleefanka gacanta, taleefanka go'an, Internetka go'an iyo Internet-ka wireless-ka ah. Ilaa inta sicirku is waafajinayo, waxaan tilmaami karnaa inta daqiiqo iyo xogta aan dooneyno inaan isticmaalno ugu badnaan, iyo sidoo kale xulashooyinka soo socda:
Calan ugu badnaan khidmadda bil kasta.
Habka lacag bixinta (si aad u kala doorato bixinta hore iyo qandaraaska).
Inuu sii joogi doono iyo in kale.
Haddii aan raadineyno dalacaad iyo in kale.
Haddii ay bixiso 4G, 3G ama xiriiro kale.
Daqiiqado ayaa lagu daray.
SMS ayaa lagu daray.
Haddii ay bixiso suurtagalnimada VoIP.
Haddii ay dalbadaan yareynta xawaaraha.
Iyo haddii kharashyo dheeri ah lagu dabaqi doono marka la dhaafayo xadka la dejiyay.
Marka raadintayada la habeeyo oo la aqbalo, Roams wuxuu na siin doonaa qiimayaal kala duwan oo na xiiseyn kara. Haddii aan mid galno, waxaan eegeynaa dhammaan faahfaahinta waana xiiseyneynaa, kaliya waa inaan ku taabannaa calaamadda xarfaha cad iyo asalka cagaaran ee oranaya «waan xiisaynayaa» toos noo geyn doonta webka si aan qandaraaska usameyno sicirka cusub.
Haddii aan u maleyneyno in waxaas oo dhan ay aad u badan yihiin oo aan dooneyno inaan sameyno raadinta nafteenaTan waxaa sidoo kale lagu sameyn karaa qeybta Roams Operators. Qeybtaan waxaan ku arki doonaa dhamaan hawl wadeenada laga heli karo Isbaanishka oo helitaanka iyo isbarbar dhiga qiimayaashu waa uun dhowr qasabado. Farqi weyn ayaa u dhexeeya tan iyo inaad sameyso baaritaanka Google nafteena. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira hawlwadeeno badan oo aan ka heli karno qaar runtii xiiso leh oo aanan ogeyn inay jiraan. Oo hadaadan wali garanaynin shuruudaha aad ku dooranayso shirkad, waxaan haynaa kuwan aan gacanta ku hayno tilmaamaha ku saabsan xulashada mobilahaaga.
Qeybta Qiimeynta waxaan ku arki karnaa waa kuwee heerarka ugu fiican ee nooca. Mar alla markii aan dooranno haddii aan dooneyno sicirka mobilka oo qandaraas leh, horay loo sii siiyay, haddii aan dooneyno oo keliya Internet go'an ama mid isku darka dhammaan qiimayaasha, waxaan heli doonnaa saddex ikhtiyaar oo la heli karo: mid aan ku keydinno inta ugu badan ee suurtagal ah, midna inaan la hadalno oo aan dul maro mid kale oo loogu talagalay dadka isticmaala aadka u baahan. Marka aan doorano xulashadeena, waxaan arki doonnaa sicirka ugu wanaagsan ee isticmaalka noocaas ah.
Sidaad u jeeddo, Roams waa isbarbardhige heerka taleefanka oo dhammaystiran. Oo ugu fiican oo dhan, waa a codsiga bilaashka ah, markaa waxaan qabaa inay mudan tahay in la siiyo isku day. Iyo, haddii aanaan ku qanacsaneyn heerka aan hadda joogno, waxaa habboon in la raadsado beddelaad iyo meesha ugu wanaagsan ee laga fiiriyo midka aan ku aragno dhammaan xulashooyinka?
Soo dejiso barnaamijka Roams ee loogu talagalay macruufka iyo Android xiriiriyeyaasha waxaad ka heli doontaa hoosta:
Roams - Xogta iyo isticmaalka wicitaanka
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Roams, codsiga kaa caawin doona inaad yareyso biilka taleefankaaga
Josera Garcia dijo
Waa hagaag, waan soo dejiyey oo way fiicantahay. Waxaan u isticmaali doonaa xoogaa si aan u qabsado wicitaankayga iyo isticmaalka internetka oo aan aragno haddii aan heli karo sicir adag.
Waxyaabahani waa qabow si loo badbaadiyo
Jawaab Joserra Garci
Waad isku dayday, sidee tahay Waxaan doonayaa inaan kala soo baxo hadda waxaan rajeynayaa inay shaqeyneyso
Runtii waan jeclahay Weplan. Degso oo isbarbar dhig midkee fiican 🙂
6 wararka aan arki doonno imaatinka macruufka 10
Sida loo ogaado haddii mobiil la xado